ဆာသော်ဒိုး- အာဏာရှင်များ ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ . . . - MoeMaKa Media
Home / Coup / Essay / Literature / Sir Thawdow / ဆာသော်ဒိုး- အာဏာရှင်များ ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ . . .
အာဏာရှင်များ ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ . . .
"ရုပ်" ခန္ဓာရော "စိတ်" သန္တာန်ပါ လုံးဝကျေပျက်ချုပ်ငြိမ်းကာ ဘဝအသစ်တဖန် ပြန်လည်မဖြစ်တော့သည့် " နိဗ္ဗာန်" မရောက်ရှိသေးသမျှ လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဘဝကား သံသရာတစ်ကြောမှာ အဖန်တစ်ရာမက မျောနေရပေဦးမည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါလေ၏။
ကြိုးစားလျှင် "ဘုရား" တောင်မှ ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိသည့် လက်ရှိလူ့ဘဝဟာဖြင့် ဘယ့်ကလောက်များအဖိုးအနဂ္ဂထိုက်တန်သလဲဆိုတာ တွေးဆဆင်ခြင်ဉာဏ်နှင့် မြင်ကြည့်ပါက လုံးဝကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်တကား။
ယခုပစ္စုပ္ပန် လက်ရှိရှင်သန်နေဆဲဘဝဟာဖြင့် သင့်လက်ထဲမှာရှိနေရာ အနှီအခြေအနေမှနေ၍ မိမိတို့၏ အနာဂတ်ဘဝတွေကို ပုံဖော်သွန်းလောင်းလေရာ မိမိသာလျှင် မိမိဘဝ၏အရှင်သခင်ဆိုတာကို အသေအချာ မြင်ရပါလေ၏။
" "စာ" ကောင်းရေးချင်လျှင် စိတ်ကောင်းမွေးရမည်မှာ ပထမ " ဟု ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာများက ပြောကြားသွန်သင်ခဲ့လေရာ အင်မတန်မှကို အဖိုးတန်လှသည့်စကားပါလေ။ ဤသည်ကား စာသမားတွေအတွက်သာ ကွက်ပြီး အသုံးချရမှာမဟုတ်မူဘဲ လူထဲသူထဲ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဤကဲ့သို့သာ စိတ်ကောင်းမွေးကြဖို့သာ ဖြစ်ပါပေ၏။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ စိတ်ကောင်းမွေးသူတွေများလျှင် ရပ်ကွက် အေးချမ်းမည်။ မြို့နယ်တွေမှာ စိတ်ကောင်းမွေးသူတွေများလျှင် မြို့နယ်တွေ အေးချမ်းမည်။ နိုင်ငံတော်မှာ စိတ်ကောင်းမွေးသူတွေ များများရှိလာလျှင် နိုင်ငံ တော်တွေ အေးချမ်းသာယာမည်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ စိတ်ကောင်းမွေးသူတွေ များသထက်များလာလျှင်ကား ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးမှာ အေးချမ်းသာယာလှပလာပေမှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါလေ၏။
တကယ်တော့ စိတ်ကောင်းမွေးဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲသောကိစ္စတော့ မဟုတ်တန်ရာပါ။ တအားကြီး ကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ဖော်ဆောင်မှ ရရှိလာမည့်အရာလည်းမဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ လက်ရှိ လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ခံစားမှု စိတ်ကလေးကို နည်းနည်းလေး ပြောင်းလိုက်ရုံမျှသာပါ။
" နည်းနည်းလေး ' ဟု ဆိုသော်ငြား အချို့အချို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာကား တစ်သက်တာလုံး စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း မရှိခဲ့၊ မသုံးခဲ့လေရာ " အား "
လေးတော့ စိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါပေ၏။
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ "အာဏာရှင်တွေ" တယောက်ပြီးတယောက် ငါးပါးမှောက်ကာ တောက်လျှောက် တသီတတန်းကြီး ပျက်စီးပျက်သုဉ်းနေတာကို ရှေ့မှာ ရှေ့မှာ ရှေ့မှာ အထူးသင်ခန်းစာများ ရှိနေပါလေ၏ ခင်ဗျာ။
"သင်ခန်းစာ" ဆိုတာ ယူတတ်မည်ဆိုလျှင် အင်မတန်မှကို အသုံးဝင်သည့်အရာပါလေ။ သင်ခန်းစာတွေကို ပိုက်ဆံငွေကြေး ဘီလီယံချီကာ ပေးပြီး ဝယ်စရာမလို။ ယနေ့အခါ ဤမှာ ဟိုမှာ လက်တွေ့အခမဲ့ မြင်မြင်နေရပါသည့် "အာဏာရှင်ကြီးတွေ၏နောက်ဆုံးအချိန်" တွေမှာ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့် ထွက်ခဲ့ကြရပါသနည်း။
သင်ခန်းစာဆိုတာ ယနေ့ တပုံတခေါင်းပါ။
များမကြာမီနှစ်ပိုင်းတွေမှာပဲ ကမ္ဘာပေါ်က ကမ္ဘာကျော် "အာဏာရူး အာဏာရှင်တွေ" ဟာ ဘယ်အခြေဘယ်ကမ်းကို ဘယ်လို ဆိုက်ကပ်ခဲ့ပါသနည်း။ "အရှင်ထွက်" တာနှင့် "အသေထွက်" တာ ဘယ်အရာက ပို၍ များပြားလှပါသနည်း။ "ဆဒမ်ဟူစိန်" ကို သင်ခန်းစာယူပါ။ သူ့ကို မကြိုက်လျှင် "ကဒါဖီ" ကို သင်ခန်းစာယူပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အသက်အရွယ်တွေ အိုမင်းရင့်ရော် ဂိတ်ဆုံးအချိန်ကာလမှာမှ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရောဂါဝေဒနာရော စိတ်ဖိစီးမှု အစုစုပါ တစ်ပြိုင်နက် ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရသည့် ယနေ့လက်ရှိ ကမ္ဘာကျော်အာဏာရှင်ဟောင်းကြီးများကို ဥပမာကြည့်ကြပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုအပေါ် ခေတ်အဆက်ဆက် ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ဖိနှိပ်အုပ်စိုးကာ သူတို့ သူတို့၏သံဖနောင့်တွေအောက်မှာ နင်းခြေခံခဲ့ရသည့် လူထုပြည်သူတွေဟာ အဲဒီအာဏာရှင်တို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး သုတ်ခြေတင်ရချိန်မှာ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်ကန်ကျောက်သတ်ဖြတ်ကြတာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါလေ၏။
ဇမ္ဗူ ဒီပါ လကျ်ာတောင်ကျွန်း နိမိတ်ထွန်းသည့်ရွှေနိုင်ငံတော်မျိုးဆီမှာ အာဏာရှင်ဖြစ်ခဲ့သူများကား တအား တအား တအားကိုပဲ ကံကောင်းကြပါပေ၏ခင်ဗျာ။ ဟိုအရင် ခေတ်အဆက်ဆက် စနစ်အဆက်ဆက် ပြည်သူ လူထုဟာဖြင့် မေ့လွယ်ပျောက်လွယ်တယ်။ ခွင့်လွှတ်တတ်တာ ရှာမှရှားပါခင်ဗျ။ နာစရာရှိတာတွေကို လွမ်းစရာနဲ့သာဖြေခဲ့ကြတာ တွေ့ရမှာပါ။ မမေ့နိုင်သော်လည်း ခွင့်တော့လွှတ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။
တခါတုန်းက ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီချွတ်ပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကြီးကိုတည်ဆောက်ကာ အရပ်ဝတ်လဲအုပ်ချုပ်တော်မူခဲ့သည့် ဘဘကြီးတယောက် သူ၏နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေခေတ်ရောက်လို့ အိုကြီးအိုမအရွယ်မှာ ကွယ်လွန်၍ အနိစ္စ္စရောက်လေရာ သူ၏အစိမ်းမျိုးဆက်ကပဲ လူမသိသူမသိ မထင်မရှား မီးရှို့သင်္ဂြိုဟ်ပစ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါလေ၏။
ဤအခါက နိုင်ငံတော်၏ မင်္ဂလာဒုံစစ်သချိ ုင်းတွင်ပင် လူသိရှင်ကြား ပရိသတ်နှင့်ဘာနှင့် ကျကျနန ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်မရခဲ့ဘဲရှိခဲ့ရာ လိုက်ပါပို့ဆောင်ချင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့မှာ အခါမသင့်အခွင့်မသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါပေလေ၏ ခင်ဗျာ။ ပြန်လည်ကြားသိရသည်က လူကလေး လေးငါးခြောက်ယောက်လောက်နှင့်သာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဆိုသူ အာဏာရှင်တစ်ယောက် မှာ ထွက်ခွာခဲ့ရပါလေ၏။ ဤကား တရားရစရာ တရားကျစရာ။
"ဦးသန့်" ကွယ်လွန်စဉ်ကဆိုလျှင် ချစ်သည့်ပြည်သူလူထုမှာ မရရအောင် အလောင်းကိုလုကာ ကျကျနနသင်္ဂြိုဟ်ဂုဏ်ပြုဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိပင် ဖြစ်ပါလေ၏။ ဗိုလ်ချုပ်ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်စဉ်ကလည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသည့် ကျောင်းသား မိဘ ပြည်သူတွေမှာ အဆမတန် များပြားလှတာ တွေ့ရပါလေ၏။
နိုင်ငံ၏လူထုမှာ သူတို့ချစ်ပြီဆိုပါက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေသာမက အနုပညာရှင်တွေ အတတ်ပညာရှင်တွေကိုပါ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ လိုက် ပါပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်တာ အစဉ်အလာပါခင်ဗျာ။ ဥပမာအားဖြင့် ပြေငြိမ်းကွယ်လွန်စဉ်က ကြည့်မလား။ တွံတေးသိန်းတန်ကွယ်လွန်စဉ်က ကြည့်မလား။ ဥပမာများပြောပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဆရာဦးဝင်းတင်အနိစ္စရောက်စဉ်၊ ဆရာခင်မောင်ရင် ဘဝတပါးပြောင်းစဉ်၊ ဆရာဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန်စဉ်၊ ဆရာသင်းရီ၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်တွေမှာ သူတို့ကချစ်တဲ့၊ သူတို့ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ရောက်ရာအရပ်ကနေ ကြားရာဒေသကနေ အရောက်လာကြပြီး နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကာ ကန်တော့ခဲ့ကြတာကို မြင်ခဲ့ကြရပါပေ၏ခင်ဗျာ။
"အာဏာရှင်တွေ" သေလျှင်ကား လူမရှိသူမရှိ ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု အချို့က ဆိုကြ ပြောကြပါပေ၏။ ကျွန်ုပ်အထင်တော့ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်နိုင်ပါဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ပြည်သူတွေအပေါ် မတော်မတရား မညှာမတာသွေးစုပ် အုပ်ချုပ်နင်းခြေခဲ့ကြသည့် အနှီအာဏာရှင်များသေဆုံးချိန်တွင် လူထုကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်သာပြုပါက ကျွန်ုပ်ကအစ လိုက်ပါပို့ဆောင်မှာပါ ခင်ဗျာ။
သူတို့ သူတို့ကို မီးရှို့သည်ဖြစ်စေ ဂူသွင်းသည် ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ အနားမှာ ရှိနေမှာပါ။
" တကယ် " သေ မသေ " ဆိုတာ သေသေချာချာ အနီးကပ် စပ်စုချင်လို့ပါ ခင်ဗျ "
ဆာသော်ဒိုး- အာဏာရှင်များ ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ . . . Reviewed by k on 6:13 AM Rating: 5